Admin | २०७५-०३-२१ | ३११ १६
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेमा ११४० जेष्ठ नागरिक, ५०४ एकल महिला, २४ पूर्ण अपाङ्क २४ र १३ जना आंशिक अपाङ्ग
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको वडा नं. ७ ले ७५ बर्ष उमेर पूरा भएका महिला र ८० बर्ष उमेर पूरा भएका अस्पतालमा उपचाररत जेष्ठ नागरिकलाई अस्पतालमै गएर महानगर जेष्ठ नागरिक विशेष भत्ता वितरण गरेको छ । अस्पतालमै भत्ता पाउनेमा ८६ बर्षिया, सीता डंगोल र ८५ बर्षिय मीनप्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्छ । डंगोल घरमा लडेर घुँडामा लागेको जटिल चोटका कारण अपाङ्ग बन्नुभएको छ । यसैकारण उहाँको अपाङ्ग अस्पताल, जोरपाटीमा उपचार भइरहेको छ भने उपाध्याय, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा टाउकोको शल्यक्रिया गरेर थप उपचार गराइरहनु भएको छ । उता हेल्पिङ् हेण्डस् अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत ८४ बर्षिय हीरादेवी मानन्धरको अहिले मृत्यु भइसकेको छ । उहाँलाई पनि अस्पतालमै पुगेर विशेष भत्ता दिइएको थियो ।
आफ्नो उमेरमा परिवार र समाजका लागि मरिमेट्ने पाको उमेरका आमाबुबालाई भत्ता दिँदा उहाँहरुको अनुहारमा अपार खुशी देख्छु । वडाध्यक्ष शुद्धकुमार डंगोल भन्नुहुन्छ — आपत् परेका बेला सरकार छ भन्ने नागरिकलाई महसुस भयो भने बल्ल लोकतन्त्र आएको मान्नुपर्छ । म मेरो वडाका हरेक नागरिकलाई सरकारको महसुस गराउँछु ।
भत्ता वितरण गर्न अस्पताल र घरघरमा हिँडिरहनु भएकी वडा सदस्य निर्मला पुडासैनी भन्नुहुन्छ — हाम्रा वडामा त १०० बर्ष उमेर कटेका बुबाआमा पनि सक्रिय जीवन विताइरहनु भएको छ । मैजुबहाल बस्ने १०२ बर्षिय हिरण्यप्रसाद उपाध्याय आफैं शौचालय जाने आउने घरभित्र हिँडडुल गर्नुहुन्छ । अस्ति भूपाललक्ष्मी प्रधानकोमा पुग्दा उहाँ नातिको भोटो सिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ १०० बर्षकी हुनुहुन्छ ।
बिशेष भत्ता वितरण गर्ने क्रममा विहीबार वडाध्यक्ष शुद्धकुमार डंगोल र वडा सदस्य पुडासैनी बत्तीस पुतलीको नारायण गोपाल मार्गमा पुग्नुभयो । त्यो ठाउँ वडा ७ क्षेत्र होइन, तर वडा नं. ७ का स्थायी बासिन्दा लालबहादुर मगर बहालमा बस्नुहुन्छ । उहाँलाई प्यारालाइसिस भएको छ । ८१ बर्षिय मगर बाहिर हिँड्न सक्नुहुन्न तर कोठाभित्रै अलि अलि बामे सर्नुहुन्छ । उहाँलाई भत्ता दिन घरमै पुगेपछि, वडा सदस्य पुडासैनीले कागजपत्र मिलाउनु भयो वडाध्यक्ष डंगोलले रकम प्रदान गर्नुभयो । पैसा पाएपछि खुशी देखिनुभएका मगर भन्दै हुनुहुन्थ्यो — खुशी लाग्यो, कष्ट गरेर घरसम्म आइदिनुभयो ।
२०७२ सालको भूकम्पले मगरको घर भत्किएपछि यस ठाउँमा छोरीसँग बहालमा बस्दै आउनुभएको छ ।
यता सिफल पनेकु मार्गमा रहेको घरमा बस्दै आउनुभएका ८६ बर्षिय जुजुभाइ महर्जन र ७६ बर्षिया नानीमाया महर्जनलाई पनि विहीबारै घरमा पुगेर विशेष भत्ता प्रदान गरियो । महर्जन दम्पत्ति पनि घरमै पैसा पाएपछि खुशी देखिनुहुन्थ्यो । यस क्रममा जुजुभाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो — गरीव भएकोले यो पैसा दिएको होला । उहाँको यो प्रतिक्रिया सुनेर वडा सदस्य पुडासैनी सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो — यो पैसा गरीव भएर दिने वा धनी भएर नदिने पैसा होइन । पाका उमेर भएपछि केही खान मन लाग्ला, केही लाउन मन लाग्ला, नाति नातिना वा छोरी चेलीलाई केही दिन मन लाग्ला । मन लागेको चीज किन्न वा दिन पैसा नहोला । त्यो समस्या समाधान गर्न यो भत्ता रकम दिएको हो ।
उहाँहरुसँगै यस बर्ष वडा नंं ७ का २७४ जना जेष्ठ नागरिक र १६ जना पूर्ण अपाङ्गले महानगर विशेष भत्तावापत्को रकम प्राप्त गर्नुभयो । वडामा पूर्ण अपाङ्गको संख्या २४ छ । त्यसमध्ये यसै बर्ष १ जनाको मृत्यु भएको खवर प्राप्त भएकोछ, संख्या बताउँदै वडा सचिव कविता राई भन्नुहुन्छ — ७ जना सम्पर्कमा आउनु भएको छैन । उहाँका अनुसार, वडाबाट वितरण हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा ९४ लाख ९१ हजार २०० रुपैयाँ निकासा भएकोमा ८५ लाख ९० हजार ४०० रुपैयाँ वितरण भयो । त्यस्तै ७८ लाख ८९ हजार ६०० रुपैयाँ निकासा भएकोमा दोश्रो चौमासिकमा ८६ लाख ६७ लाख २०० वितरण भयो । तेश्रो चौमासिकका लागि ८९ लाख ४४ हजार निकासा भएको छ ।
वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने जेष्ठ नागरिकको संख्या ११४०, एकल महिला ५०४, पूर्ण अपाङ्क २४ र आंशिक अपाङ्ग १३ जना हुनुहुन्छ ।
KMC Ward 7
टोखा नगरलाई बालमैत्री उद्यान निर्माण गर्न महानगरको १ करोड रुपैयाँ सहयोग Previous Post
निष्क्रिय जीवन र तनाव, नसर्ने रोगको बीउ Next Post